Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Ndị kọrịnt 2:1-16
Ozi ọma Pọl zisara na Kọrịnt (1-5)
Amamihe Chineke enweghị atụ (6-10)
Onye mmụọ nsọ na-edu na onye anụ ahụ́ na-achị (11-16)
2 Ụmụnna m, mgbe m bịara izisara unu ihe nzuzo dị nsọ+ gbasara Chineke, agwaghị m unu okwu ka onye oké amamihe+ ma ọ bụ otú ga-eme ka unu towe m. 2 N’ihi na m kpebiri na naanị ihe m ga-agwa unu bụ okwu gbasara Jizọs Kraịst, nakwa gbasara ogbugbu e gburu ya n’elu osisi.+ 3 Mgbe m bịakwutere unu, esighị m ike. Ụjọ nọ na-atụ m, m nọkwa na-ama jijiji. 4 Mgbe m na-agwa unu okwu, na-akụzikwara unu ihe, ejighị m ire ụtọ gwa unu okwu otú ndị oké amamihe na-eme, kama m gwara unu okwu otú gosiri na mmụọ nsọ na-akpa ike,+ 5 ka okwukwe unu nwere bụrụ n’ihi ike Chineke, ọ bụghị n’ihi amamihe mmadụ. 6 Anyị na-agwa ndị siri ike n’okwukwe banyere amamihe,+ ma, ọ bụghị amamihe nke oge a,* ọ bụghịkwa nke ndị na-achị ụwa a, n’ihi na ha agaghịzi adị.+ 7 Kama, anyị na-ekwu gbasara amamihe Chineke. Amamihe a bụ ihe nzuzo dị nsọ.+ Tupu ụwa ọjọọ a adịwa, Chineke bu n’obi ime ihe otú ga-adaba n’amamihe a, ka anyị nwee ike dị ebube. 8 O nweghị onye ọ bụla n’ime ndị niile na-achị ụwa a* ma gbasara amamihe a,+ n’ihi na ọ bụrụ na ha ma ya, ha agaraghị egbu Onyenwe anyị dị ebube.* 9 Ọ dabara n’ihe a e dere: “Ihe ndị anya na-ahụtụbeghị, nke ntị na-anụtụbeghịkwa, nke na-abatatụbeghịkwa ndị mmadụ n’obi, ka Chineke kwadebeere ndị hụrụ ya n’anya.”+ 10 Ma, Chineke ji mmụọ ya+ mee ka anyị mara ha,+ n’ihi na mmụọ ya na-eme ka a mata ihe niile, ọbụnadị amamihe Chineke nke dị omimi.+ 11 Mmadụ ò nwere ike ịma ihe dị onye ọzọ n’obi? Mbanụ. Ọ bụ naanị onye ahụ ma ihe dị ya n’obi. Ọ bụkwa otú ahụ ka a na-enweghị onye ma ihe dị Chineke n’obi, ma e wezụga mmụọ nsọ Chineke. 12 Ma, ọ bụ mmụọ nsọ Chineke na-achị anyị,+ ọ bụghị mmụọ nke ụwa, ka anyị wee mata ihe niile Chineke ji obiọma nye anyị. 13 Anyị na-ekwukwa gbasara ihe ndị a. Ma, ọ bụghị ihe mmadụ ji amamihe ya kụzie ka anyị na-ekwu,+ kama ọ bụ ihe mmụọ nsọ kụziiri anyị.+ Anyị jikwa ihe mmụọ nsọ mere ka anyị ghọta na-akọwa ihe ndị gbasara Chineke. 14 Ma onye anụ ahụ́ na-achị anaghị anabata ihe ndị gbasara mmụọ nsọ Chineke, n’ihi na ha bụ ihe nzuzu n’anya ya. Ọ gaghịkwa amatali ha, n’ihi na mmadụ ga-enwerịrị mmụọ nsọ tupu ya enwee ike inyocha ha. 15 Ma, onye mmụọ nsọ na-edu na-enyocha ihe niile,+ ma o nweghị mmadụ ọ bụla na-enyocha yanwa. 16 N’ihi na Akwụkwọ Nsọ kwuru, sị: “Ònye ma uche Jehova,* nke na ọ ga-akụziri ya ihe?”+ Ma, anyị ma uche Kraịst.+
^ Ma ọ bụ “oge a.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ma ọ bụ “ha agaraghị egbu Onyenwe anyị dị ebube n’elu osisi.”